Sirdoonka Yahuudda oo la sheegay in uu halis weyn ku hayo faragelinta uu ku sameeyay mandiqadda Khaliijka.
Monday June 13, 2022 - 18:12:28
Maamulka Yahuudda ayaa tan iyo markii uu sida muuqata heshiiska ula gaarey qaar kamid ah dowladaha carbeed, gaar ahaan kuwa dhaca Khaliijka Carbeed, wuxuu isku howlayaa sidii uu saameyn muuqata oo amni ah ugu yeelan lahaa dalalkaas.
Yahuudda ayaa heshiisyo xagga iskaashiga arimaha amniga iyo difaaca wuxuu la gaaray wadamo ay kamid yihiin Al-Baxreyn iyo Imaaraatka Carabta, waxayna doonayaan in manduumaadyada difaaca ay ku xiraan wadamadaas, taasoo ka dhigan faragelin muuqata oo ay Yahuuddu ku sameynayaan bartamaha caalamka Islaamka.
Maamulka Talla’biib ayaa ku andacoonaya inuu tallaabooyinkaas uu qaadayo kaga gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa halisyada amni ee dowladda Carbeed uga imaaneysa Iiraan, taasoo dad badan ay aaminsanyihiin iney tahay waxba kama jiraan, balse ay doonayaan in si tartiib tartiib ah ula wareegaan wadamada caalamka Islaamka, ama saameyn muuqata ugu yeeshaan masiirka shacabka dalalkaas.
Dhawaan, bayaan si wadajir ah usoo saareen labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee dalka Maraykanka, waxay ku sheegeen in maamulka Yahuudda uu isku diyaarinayo inuu iskaashi xagga difaaca iyo amniga la saxiixdo dowladaha Khaliijka qaarkood, arintaas oo googl xaar looga dhigayo in manduumada raadaarada difaaco wadamada Al-Baxreyn iyo Imaaraatka, iyadoo lagu doodayo ka hortaga halisyada ka imaanaya dowladda shiicada ah ee Iiraan.
Telefeshinka 12aad ee maamulka Yahuudda ayaa baahiyay xogo la xiriira in manduumada amnigsa ee Yahuudda ay raadaaro ku xirtey wadamo dhaca waxa loogu yeero bargia dhexe iyo Khaliijka, saacado kadib booqasho kedis ah oo uu maalintii Khamiista dalka Imaaraatka Carabta ku tagay ra’iisul wasaaraha Yahuuudda Naftali.
Telefeshinka baahiyay xogtan ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo waqtiga rasmiga ah ee la shaqo geliyay manduumadaas, halka lagu xirey, jihada rasmiga ah ee howl gelinteeda iska leh, waxaase xogo aad la iskula dhexmrayo ay tilmaamayaan in saraakiil Yahuuud ah ay howshaasi gacanta ku hayaan.
Manduumada Raadaarada ee ay Yahuuddu ku xireen wadamada Al-Baxreyn iyo Imaaraatka Carabta ayaa timid wixii ka dambeeyey sawaariikhdii kooxda Xuuthiyiintu ku garaaceen dalka Imaaraatka Carabta, xilli uu waqtigaas booqanayay madaxweynaha maamulka Yahuudda, waxaana Yahuuddu xilligan marmarsiyo ka dhiganayaan sidii looga hortagi lahaa sawaariikhda Iiraan ee soo gaaraya Imaaraatka Carabta, ama loo heli lahaa digniino horudhac ah ka hor inta aaney sawaariikhdaas soo dhicin.
Macluumaadkan hadda daaha laga rogay ee muujinaya galaaangalka xagga amniga ah ee ay Yahuudu ku yeelanayaan wadamada Khaliijka, wuxuu banaanka soo dhigayaa dib u dhaca kaalintii Masar ay ku lahayd amniga Khaliijka, iyadoo taas bedelkeeda uu sii kordhayo dowrka Yahuudda ee dalalka carabta, xilli laga cabsi qabo in Yahuudda iyo dowladda Iiraan uu dhexmaro dagaal aan toos ahayn, kaasoo fagaariyaashiisa ugu muuqda ay kamid tahay wadamada Khaliijka Carabta.
Masuul Yahuudi ah oo horey xil uga soo qabtay golaha amniga ee Yahuudda ayaa tilmaamaya in Imaaraatka Carabta halista ugu weyn ee wajaheysa jiritaankeeda ay u aragto iney ka imaaneyso xaga Iiraan, dhibaatadaas oo saameyn karta howlaha duulimaadyada garoomada Imaaraatka.
Wuxuu masuulkan Yahuudiga ah intaa ku daray in Imaaraatka ay xitaa ka baqeyso in dowladda Iiraan ay gudaha Imaaraatka ka fuliso weeraro beegsada goobo muhiim ah ama xitaa ciidamada Iiraan ay duulaan xagga bariga ah kusoo qaadaan Imaaraatka, kaasoo dhalin kara in Imaaraatka laga faramaroojiyo dhul horleh oo kamid ah dalkeeda.
Cabsidaas ayaa u horseeday dowladda Imaaraatka Carabta iney howlgeliso manduumaadyo difaac oo horleh, ayna iskaashi xaga amniga ah la sameyso maamulka Yahuudda, waxaana dhanka kale ay isku dayeysaa in heshiis macquul ah la gaarto Iiraan, si looga baaqsado ixtimaalaatkaas halista badan ee Imaaraatka uga imaan kara xagga Iiraan.
Masuulka Yahuudiga ah ee warbaahinta la hadlay ayaa maamulka Yahuudda usoo jeediyay iney il gaar ah ku fiiriyaan waxa soconaya, iyo in Imaaraatka Carabta aanu noqon Karin dal lagu tashado haddii uu dhaco dagaal dhexmara Iiraan iyo Yahuudda, ama uu dhaco heshiis cusub oo xaga nuclearka ah, kaasoo Iiraan ka dhigaya mid la macaamili karta awoodaha maadiga ah ee kajira caalamka.
Baare kamid ah machad ka faallooda arimaha amniga oo taabacsan jaamacadda Talla’biib ayaa sheegay iney wax iska cad tahay danta ugu jirta Yahuudda iyo qaar kamid ah dowladaha Khaliijka in hoos loo dhigo awoodda sii kordheysa ee dowladda shiicada ah ee Iiraan.
Hadaba si arinkaas loo xaqiijiyo waxay Yahuudda iyo dowladaha Khaliijka iska kaashanayaan sidii loo wiiqi lahaa awoodda malleeshiyaadka Iiraan ee ku sugan dalka Ciraaq, talada wadankana loogu gacan gelin lahaa xukuumadda Rawaafida, sida uu tilmaamayo baarahan.
Wuxuu intaa ku daray in haddii ay dhacdo iska hor imaad muuqda oo dhexmara Yahuudda iyo Iiraan ay halista ugu weyn soo wajihi doonto dowladaha Khaliijka Carabta, maadaama ay xulafo la yihiin Yahuudda, ahdaafta Yahuudda ee dhulalkaasna ay u fududahay Iiraan iney beegsato, si ka duwan dhulka gumeysiga ku jira ee Filastiin.
Inkastoo Yahuudda ay hadda aad isugu howleen in Ciraaq ay heshiis muuqda la gaaraan, hadana uma suuragelin arinkaas, sababo ku aadan iyadoo Baqdaad ay awood muuqata ku leedahay dowladda shiicada ah ee Iiraan, taasoo marka dhan kale laga eego u fududeyn karta dowladaha Khaliijka iney ka shaqeeyaan sidii xiriir hoose uga dhex furi lahaayeen maamulka Rawaafida Ciraaq iyo kan Yahuudda ee xooga ku heysta dhulka Filastiin.
Safiirkii hore ee Yahuudda u fadhiyay dalka Masar ninka lagu magacaabo Isxaaq ayaa dhankiisa wuxuu rumeysanyahay in gaashaanbuursi weliba oo dhexmara Khaliijka iyo Yahuudda uu muujinayo sida nidaamka Siisi ee dalka Masar iyo kan Yahuudda aanu raalli marnaba uga ahayn siyaasadaha Joe Biden, madaxweynaha dalka Maraykanka ee la xiriira arimaha waxa loogu yeero mandiqadda bariga dhexe, si gaar ah marka laga hadlayo ka hortaga awoodda sii baaheysa ee Iiraan.
Wuxuu intaa ku daray in haddii Yahuuddu ay manduumo raadaar ama kuwa difaac ku baahiyaan wadamada Khaliijka carabta ay taasi ka dhigantahay in hoos loo dhigo awoodda Iiraan, gaashaanbuursigaas abuurmayana uu isku xire muhiim ah ka noqdo maamulka Yahuudda, sida hadalka u dhigay safiirkii hore ee Yahuudda u fadhiyay dalka Masar.
Inkastoo uu ku doodayo in iskaashiga dhexmara Yahuudda iyo dowladaha Khaliijka uu hoos u dhigayo awoodda Iiraan, hadana wuxuu walaac ka muujiyay safiirkii hore ee Yahuudda u fadhiyay dalka Masar in illaa iyo hadda aan si rasmi ah loo ogeyn halka uu gaarsiisanayahy gaashaanbuursigaas, heerka uu gaari karo iskaashiga xaga amniga iyo difaaca ee dhexmari kara Yahuudda iyo Khaliijka.
Taasi waxay ka dhigantahay, sida ay dad badani aaminsanyihiin in Yahuudda oo ah dad aad caan ugu ah khiyaanada iyo wax isdaba marinta ay suuragal u tahay in sida ugu fudud ay uga baxdo gaashaanbuursigaas, haddii ay dareento halis culus oo kaga soo wajahan Iiraan, taasoo ka dhigan in dowladaha Khaliijka ay keligood wajahaan sawaariikhda kaga imaaneysa dowladda shiicada ah ee Iiraan.
Dagaal duleedkan ka dhexeeya Iiraan iyo Yahuudda waxay dad badani rumeysanyihiin inuusan ahayn dagaal ay labada dhinac ka wada go’antahay in si toos ah la isku fara saaro, balse taas bedelkeeda waa sawaxan iyo buuq lagu doonayo in lagu sii boobo kheyraadka muslimiinta ee Khaliijka, iyadoo madaxda wadamadaas loogu sheekeynayo in laga difaacayo halisyada amni ee kusoo wajahan.
Caamuus Har’iil oo katirsan wargeyska Harts ee Yahuudu leeyihiin, kana faallooda arimaha milliteriga ayaa sheegaya in si kastoo ay isku maan dhaafaan Iiraan iyo Yahuudda, uu hadana arinkaasi keeni doonin iney si toos ah isku wajahaan oo ay iskala hor yimaadaan dagaal lagu hoobto.
Wuxuu intaa ku daray in warbixinnada la xiriira weeraro lagu qaaday warshado ay leedahay Iiraan ama saraakiil Iiraaniyiin ah oo lagu dilay dalkaas, islamarkaana baahinayaan warbaahinta Yahuudda ay yihiin warar uu aad u jecleysanayo ra’iisul wasaaraha Yahuudda, oo wajahaya culeeska kala fur furka ku socda xukuumadiisa, sida uu tilmaamayo Caamuus oo ah muxallil katirsan wargeyska Harts, kana faallooda arimaha milliteriga.
Liif Raam oo isna muxallil kale oo Yahuud ah ayaa tilmaamaya in xitaa hadda ajandaha maamulka Yahuudda aanu ku jirin in weerar lagu qaado warshadaha farsameeya nuclearka ee ku yaala dalka Iiraan, isagoona shaki ka muujiyay in Yahuudda oo madax banaan ay ku dhici karto iney beegsato mustaqbalka dhow maamulka Yahuudda.
Marka la isku soo xooriyo arimahan, faragelin weliba oo Yahuudu ku sameyso wadamada caalamka Islaamka waxay ka dhigantahay burbur iyo halis cusub oo kutimid muslimiinta caalamka.